Home Wararka AMISOM oo burburisay miinooyin lagu aasay wadooyinka gala Jowhar
Ciidamada Burundi ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo miino baaris ka sameeyay inta u dhaxeeya Jowhar iyo garoonka diyaaradaha. Howlgalkan ayaa la sheegay in lagu qarxiyay dhowr miinooyin oo lagu aasay wadada, waxaana inta uu socday howlgalka ay xireen isu socodka wadada.
War ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in walxaha la qarxiyay ay ahaayeen (IEDs) oo ah miinooyinka ay sameeyaan Al-Shabaab. “Ciidamada Burundi ee AMISOM ayaa qarxiyay Walxaha Qarxa (IEDs) oo lagu aasay waddada isku xirta Garoonka Diyaaradaha Jowhar iyo Magaalada Jowhar. Bulshada iyo dadka magaalada ee maalin kasta adeegsada wadadan ayaa uga mahadceliyay hawlgalka ayaa lagu yiri”ayaa lagu yiri War ka soo baxay Warka kasoo baxay AMISOM.
Inta u dhaxeysa Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ayaa waxaa horay uga dhacay qaraxyo miino oo lagula eegtay Ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda.